Ewepụghị Isi Isi na Kamikazes | Martech Zone
Ewepụghị-Isi Oche na Kamikazes
Wednesday, November 18, 2009 Sọnde, Septemba 8, 2013 Matt Nettleton kwuru
N’ehihie a ka m gbara Matt Nettleton ajụjụ ọnụ. Matt bụ ọkachamara ahịa ọzụzụ na m onye nchịkwa onwe onye ahịa ebe a na Indianapolis. Ọrụ ọ rụzuru ugbu a agbanweela mmụọ m (na-adịghị mma) na ire na ịkwanyere azụmaahịa m ùgwù.
Ahịa bụ ọtụtụ ihe siri ike karịa ka ọ na-adịbu… site na oge folks na-akpọ gị ahịa otu, ha na-ọma mara. Ekwenyere m na ọ kpatara nnukwu mgbanwe na sistemụ ebe ahịa siri ike karịa ka ọ dị na mbụ ma ọ kacha mma ịhapụ ndị ọkachamara. Ọ bụrụ na ị bụghị onye ahịa ruru eru ugbu a, ị bụ onye na-ewere iwu.
Dị ka onye nchịkwa, Matt na-ebute atụmanya ọ chọrọ ịrụ ọrụ na iji njirimara 5 dị iche iche:
ọchịchọ - olile anya o nwere ochicho igbanwe?
nkwa - enwere olile anya?
Laghachi na ulo oru mbo - enwere nweghachi na azụmaahịa ndị ahịa?
Obi umeala nke ọgụgụ isi - onye ahịa ọ ghọtara na ha nwere nka mana ka na-achọ ka ịmeghe ya?
Iche echiche - atụmanya dị njikere ịme mkpebi ndị ga-agbanwe omume ha?
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịghọta ihe kpatara m ji kpọọ post a Ewepụghị-Isi Oche na Kamikazes, dị njikere pịa site na post maka ọdịyo. Matt bụ onye mara mma nke nwere nnukwu ihe atụ.
[ọdịyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/podcast/matt_nettleton.mp3]
Dika ahia nke ntaneti na etolite na nnabata ya dika uzo ahia nke ahia maka iweputa ndi mmadu ruru eru nke oma, websaịtị gi ma obu blog gi aghaghi aru oru karie nke ichoputa ihe n’eme ka ndi ahia gi nma Obere ọrụ na-erughị eru na-eduga na ndị ọzọ oge na-eduga na-emechi bụ mgbe ihe dị mma.
Ndi webusaiti gi na-ekwuputa ihe nke oma nke ndu gi nke oma ruru ka ndi n’enye gi? Olileanya, ebe nrụọrụ weebụ gị na-egosiputa ozi zuru oke iji kpalite mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, na-enye nkọwa doro anya nke ihe ezigbo onye ahịa bụ, na anaghị enye ọtụtụ ozi nke nnukwu ndu na-ahapụ na-enweghị itinye aka. Ọ bụ nlezianya kpachara anya!
Matt Nettleton kwuru
Matt Nettleton bụ mmetụta dị elu, onye na-ahụ maka ndị ahịa ahịa ike na onye nchịkwa nwere agụụ maka nsonaazụ yana ndekọ ndekọ egosipụtara. Enwere m ihe karịrị afọ 25 nke ahụmahụ na-ebute mgbanwe iji nweta ihe mgbaru ọsọ ma na-achọpụta ihe ndị dị mma maka mmelite ego, njikwa ego na ịba uru.
Enweghị M Asọmpi
Bufee Ozi 2.0 Web
Robert Krenz kwuru
Nov 23, 2009 na 10:37 AM
Otu okwu na-akọwa saịtị a? Mfe otu n'ime ndị kacha mma nọ na nzuzo na ..ntanetị .. Naanị chere ruo ama dị ebe a ga - apụ! Egwu!